Ngathi-K-Tek Machining Co, Ltd.
Inkampani iK-Tek Machining Co., Ltd. yasekwa ngo-2010, ibekwe kwi "World Factory" -Dongguan, China, egubungele indawo engaphezu kwama-20,000 square metres, ezikhethekileyo ngqo iindawo oomatshini processing kwaye sele kudlule ISO9001: 2015 iziqinisekiso.
Sinako ngokusesikweni imveliso zonke iintlobo izahlulo ngqo oomatshini ngokweemfuno zabathengi, iimveliso ezinxulumene oomatshini, elektroniki, esizisebenzelayo, izithuthi, zonyango, amandla amatsha kunye nezinye iinkalo. Ukuze kuqinisekiswe iimfuno ezisemgangathweni zabathengi bethu, singenise izixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nezixhobo zovavanyo ezifana noMatshini we-axis ezintlanu (i-DMG), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, Ukuphakama kokuGqibela kunye noMhlalutyi wezinto njl njl ukusuka eJamani, eJapan, eSwitzerland naseMelika. Inkampani inezixhobo ezaneleyo zokuqhubekeka ngokuchanekileyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, umgangatho wamacandelo okuchaneka unokuhlangabezana nemigangatho yemizi-mveliso kunye neemveliso ezithengiswayo phesheya.
Izinto zethu eziqhelekileyo ziyintsimbi engenasici, i-aluminium, ubhedu, isinyithi sekhabhoni, iiplastiki zobunjineli kunye nezinye iintlobo zensimbi ye-alloy. Sinokubonelela ngonyango lobushushu kunye nonyango olwahlukeneyo lwabathengi: ipolishi, i-anodizing, i-galvanizing, i-nickel plating, i-silver plating, i-passivation kunye ne-powder spraying, njl.
Emva kweminyaka elishumi yophuhliso, i-K-Tek ayinalo kuphela inani elikhulu labasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nezobuchwephesha kunye neqela lolawulo olugqwesileyo, kodwa ineqela lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuvumela abathengi abaninzi ukuba basazi, sihlala sisiya kwihlabathi ukuya kuthatha inxaxheba kwimiboniso, enje nge-United States, i-United Kingdom, iJamani, iJapan njalo njalo. Siye sazi inani elikhulu labathengi kulo mboniso, ngaxeshanye, abathengi abaninzi bamanye amazwe beze kutyelela umzi-mveliso weK-Tek kwaye baxoxa ngemicimbi yokusebenzisana. Inkxaso yakho sisikhuthazo esikhulu kuthi. Sinethemba lokubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kubaxumi abaninzi abasweleyo. Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba usebenzisane kunye nokuphuhlisa kunye.